Google ayaa Midowga Yurub ku ganaaxay kaligiis gacanta ku haya Android | Androidsis
Google horey ayey ulayaabkeeda iyo waxqabadkeedaba ulaheyd Midowga Yurub horey. Shirkadda waxaa horey loogu ciqaabay ganaaxyo ku saabsan howlaheeda, iyadoo lagu eedeeyay keli ahaansho marar badan. Waxay umuuqataa in taariikhda lafteeda ay soo noqnoqoto, inkasta oo kiiskan lala socdo Android oo ah jilaa. Shirkaddu waxay wajahaysaa ganaax cusub, kaas oo ballanqaaday inuu aad uga sarreeyo kuwii hore.
Asalka ganaaxu wuxuu ka yimid Waajibaadka Google inuu ku rakibo ugu yaraan Chrome iyo raadinta Google taleefannada, shuruud ahaan inay ku dari karaan Play Store-ka ku yaal Android. La'aan xubintaan isticmaaleyaashu ma rakibi karaan barnaamijyada, iyagoo macno darro ka dhigaya nidaamka qalliinka.
Intaas waxaa sii dheer, Google ayaa lagu eedeeyay waxay ka xaddiday soo saarayaasha inay abuuraan noocyo kala duwan oo Android ah, sidoo kale loo yaqaan fargeeto. Iyagu waa nidaamyo iyaga u gaar ah oo u isticmaala Android saldhig ahaan, laakiin waxaa loo iibiyaa inay iyagu leeyihiin. Waa inay sabab u tahay heshiis ka dhan ah tafaraaruqa, kaas oo aan ka gaarin ujeedkiisii ​​ugu weynaa.
Sababahan awgood, shirkada Mareykanku waxay ganaax kala kulantay Midowga Yurub. Ganaaxa ayaa la filayaa inuu dhaqan galo todobaadyada soo socda. Intaa waxaa dheer, tirooyinka ku saabsan xaddiga isku mid ah ayaa horeyba loo maareeyay. Xilligaan, waxay umuuqataa in Google ay tahay inay bixiso ilaa 11 bilyan oo doolar.
Tiradani maahan wax aan kala sooc lahayn waa qiyaastii 10% wareegga alifbeetada (waalidka Google iyo Android). Tani waxay noqoneysaa ganaaxii ugu badnaa ee Midowga Yurub ku soo rogo shirkad taariikhdeeda. Taas oo dhabar jab ku noqon doonta Google.
Waqtigaan la joogo aad uma cada waqtiga ganaaxa lagu dhawaaqi doono. Warbaahinta qaar waxay soo jeedinayaan taas Waxay noqon doontaa bisha Luulyo markaa waa inaan sugnaa dhowr toddobaad weli. Laakiin way cadahay in waxqabadyada shirkadda Android si wanaagsan looga helin Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Midowga Yurub wuxuu qorsheynayaa in Google ay ku ganaaxaan kaligood lahaanshaha Android